Rano Testosterone isocaproate mpanamboatra mpamatsy sy mpamatsy - Factory
Ny Testosterone Isocaproate Powder dia hormone novolena indrindra tamin'ny fitsapana ny lehilahy. Izy io no hormonina tompon'andraikitra amin'ny fanomezana lahy ny toetrany manokana. Ny testosteron transdermal dia manala ny famotsorana voa avy amin'ny vatan'ny testosteron amin'ny alàlan'ny famoahana famerenana ny fotoana. Ny poezia Isocaproate testosterone dia ampiasaina hanatsarana ny tsy fahampian'ny testosterone toy ny hypogonadism sy ny tsy fahafahana manao firaisana ara-nofo amin'ny fiterahana hafa.
Ny testosterone volo testosterone isocaproate (15262-86-9) video
Rano Testosterone poids isocaproate (15262-86-9) Description
Ny isocaproate, tsy steroide anabolika izy io, fa ny ester izay afaka mifatotra amin'ny steroid amin'ny fomba mitovy amin'ny Cypionate na ny enanthate esters. Toy ny Cypionate sy Enanthate, ny Isocaproate dia mety ho azo ampifandraisina amin'ny hormone testosterone, fa amin'ny tranga Isocaproate dia ho toy ny toerana tokana hitantsika izany. Testosterone-Isocaproate, endriny iray amin'ny endrika Ester dia tsy mahatsiaro tena; Raha hitanao izany dia mihoatra noho ny lozam-pifanampiana manokana izany, ary tsy misy antony tokony hilain'ny Testosterone-Isocaproate ao amin'io endri-tsoratra tokana io. Izay toerana hitanay dia ny ankamaroan'ny Isocaproate ester ary ny toerana ahazoany tombontsoa lehibe dia ny testosterone mixtures; indrindra omena Omnadren sy Sustanon-250. Omnadren sy Sustanon-250 dia samy mifototra amin'ny testosteron miaraka amin'ny esters 4 mifamatotra; Ny efatra dia miavaka amin'ny esters miavaka izay mamorona fitambarana testosterone iray manontolo. Ho an'ny tanjona goavana rehetra, ireo fitambarana roa ireo dia mitovy tanteraka; Ny tarehimarika ankapobeny dia mitovitovy amin 'ny fahasamihafana eo amin' ny Etera, ary toy izany koa ny tombontsoa mitovy amin 'izany. Ny singa tsirairay dia toy izao manaraka izao:
Rojo testosterone poopy isocaproate (15262-86-9) Specifications
Product Name Rojo Testosterone poopy isokaproate
Anarana simika Testosterone isocaproate;
molekiolan'ny Formula C25H38O3
molekiolan'ny Wvalo 386.576 g / mol
Storage -20 ° C
fahamarinan-toerana ≥ 2 taona
Inona no atao hoe vovo-tsokosoko Testocaster (15262-86-9)?
Anabolic androgenic steroid and form of testosterone; dia efa mihoatra ny antsasaka lava kokoa noho ny testosteron tsy natao maoderina
Ny testosterone isocaproate poeta dia fitsipi-tsoratra ara-panadihadiana voasokajy ho steroid anabolic androgenic izay azo tsidihana amin'ny ra. Izy io dia mpanaraka ny androgen natoraly, testosterone miaraka amin'ny antsasaky ny androm-piainany. Ny famolavolana izay misy ny testosterone isocaproate dia notsapaina tamin'ny fampiasana azy amin'ny hypogonadism sy ny faharetan'ny fahamaotiana. Ireo steroide anabolic, anisan'izany ny poezia isocaproate testosterone, dia nampiasaina hanatsarana ny fahatsapana ara-batana amin'ny hazakaza-tsoavaly sy atleta. Ity vokatra ity dia natao ho an'ny fikarohana sy ny fangatahana fitsarana.
Ahoana ny fomba famokarana volo testosterone roah (15262-86-9) asa
Ny testosterone isocaproate dia voafetra amin'ny asidra manify na estera izay mahatonga ny fahataran'ny famotsorana azy ao amin'ny vatana. Manana fiainana mavitrika kokoa izy io ary midika izany fa hijanona ao amin'ny vatana mandritra ny fotoana lava be izany ary noho izany dia haka izany amin'ny endriky ny tsiranoka indray mandeha na indroa avo roa heny amin'ny herinandro ampy.
Ny testosterone isocaproate poids dia mitovy amin'ny Testosteron Caproate. Manana karazana hydrogens, carbons, oksizenina ary lanjany molekule mitovy ihany koa izy saingy ny fiainana mavitrika dia iray andro raha oharina amin'ny Testosteron Caproate.
Rano testosterone vovoka isocaproate (15262-86-9) Dosage
Ny testosterone Isocaproate Powder dia azo alaina amin'ny endriny.
Ho an'ny mpangataka dia ny dosage dia asaina 250 mg / herinandro izay azo alaina indray mandeha na indroa amin'ny herinandro.
Ho an'ny mpamboly matihanina matihanina, ny dosage dia azo ampitomboina amin'ny 1000 mg isan-kerinandro koa.
Rojo testosterone poopy isocaproate (15262-86-9) soa
Ny tombontsoa azo avy amin'ny vovon-koditra mifototra amin'ny testosterone Isocaproate, toy ny Omnadren sy Sustanon-250 dia azo ravana amin'ny sokajy roa ankapobeny; ny tombontsoa azo avy amin'ireo toetra voalaza etsy ambony ary ny zavatra mampiavaka ity karazana ity raha oharina amin'ny endri-tsoratra tokana. Araka ny efa noresahina teo aloha, ny soa azo avy amin'ny fitomboan'ny testosterone dia manome ny tsara indrindra amin'ny tontolon'ny môtô amin'ny dikany kely sy lehibe, ary manome izany ho an'ny testosterone haingana izay misy fiantraikany maharitra eo amin'ny faharetan'ny faharetany. Izany dia mety mitombina loatra, nefa tsy misy zavatra hafa afa-tsy amin'izany. Avy eo isika dia manana ny tombontsoa azo avy amin'ny karazam-bolo etsy ambony, ary satria ny Omnadren sy Sustanon-250 dia saika ampiasaina ho an'ny fampisehoana fotsiny fa isika dia hifantoka amin'ny tombontsoa amin'io hazavana io.
Ho an'ny atleta ivelan'ny vanim-potoana, ny olona miezaka mampiakatra betsaka ny tanjaky ny tanjany sy ny tanjany, ny endrika Isocaproate dia safidy tonga lafatra satria hampiroboroboana ny roa tonta. Ankoatra izany, amin'ny alàlan'ny rivotra iainana metabolika, dia afaka mahazo volo bebe kokoa miaraka amin'ny fihenan-tsakafon'ny vatana ianao, ary izany dia tena zava-dehibe. Mazava ho azy, ireo fehezan-dalàna mitovy ireo dia azo ampiasaina hanapahana koa; Raha ny zava-misy, ny fampiasana ny metabolisma dia mampitombo ny fahaiza-manaony ary ny testosterone dia fitaovam-pandrosoana goavam-be mahery dia safidy tsara ho an'ny drafitra fanodinana.
Raha tsy ampy izany, na inona na inona tanjonao amin'ny fampiasana ireo testosterone mifandray amin'ny testosterone dia hampitombo ny fiaretanao ny muscular; Hampitombo ny fitomboan'ny famerenana amin'ny laoniny izy ireo ary hanome anao hery bebe kokoa aza. Tsy hivezivezy haingana ianao, hanasitrana ary ny vatanao dia hanamboatra haingana kokoa sy mahomby kokoa, ary raha tsy fampivoarana ny fampisehoana dia tsy misy na inona na inona. Amin'ny fomba maro, ny steroid testosterone dia iray amin'ireo mora indrindra hahatakarana, iray amin'ireo tsotra indrindra, fa raha toa ka tsotra dia mihoatra lavitra noho ny sarobidy ary angamba ny steroindriana sarobidy indrindra amin'ny anabolika amin'ny fotoana rehetra. Ankoatr'izay, raha ny lahy ihany no lehibe, dia iray ihany koa ny olona iray malala-tanana indrindra, ary tsy misy zavatra sarobidy kokoa noho izany.
Buy Testosterone vaporisate powder avy amin'ny Buyaas.com